ကြေငြာ မဟုတ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြေငြာ မဟုတ်ပါ
Posted by မောင် ပေ on Jul 10, 2011 in Creative Writing, Think Different |5comments
မနေ့ က အကြည်တော် ရဲ့ အချစ်ကထာ ဆိုလား ဘုတ်အုပ် ကို ဖတ်ရတယ် ။ ချစ်သူ ရည်းစား တွေ ရဲ့ အကြောင်း ကို အကုန်လုံး မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေး ရေးထားတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ လဲ အကြည်တော် ဟာ မိန်းမ တော်တော်များများ ရဲ့မေတ္တာ ကို ခံယူ ရတာ ( အမှန်တွေ ကို ဖော်သဖြင့် ) နေမှာ လို့ တွေးမိတယ်ဗျာ ။ စာရေးဆရာ က ယောက်ျားဆိုတော့ ယောက်ျားတွေ ဘက်ကိုတော့ နဲနဲ အလေးသာ ရေးထားသလို ပါပဲ ။ အကြည်တော် ၀တ္တုဖတ်တယ်ဆိုလို့ ပေါပေါလောလော စာတွေ ကို ဖတ်တယ် လို့ ပြောချင်လည်း ပြောကြပါစေ ဗျာ ။ အဓိက က တော့ entertainment ဆိုတဲ့ သဘော ကို မေ့နေကြလို့လို့ ပဲ တွေးမိပါတယ် ။ တစ်ချို့ က ပြောလိမ့်မယ်
` စာဖတ်ပါတယ် ဆိုမှ အဖိုးတန်စာ ပညာပေးတဲ့စာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် စာ မှ ဖတ်သင့်တယ် ´ လို့။
ဒါက လူတော်တော်များများ လက်ခံထားတဲ့ အတွေး အခေါ်၊ ခံယူချက်လေးပါ ။ အကျိုးရှိတယ် ၊ အကျိုးမရှိတယ် ၊ ပေါပေါလောလော ဖြစ်တယ် ၊ မဖြစ်တယ် ဆိုတာ က တစ်ကယ်တမ်း စာကို ပြီးအောင် ဖတ်ပြီး မှ ကောက်ချက် ချ လို့ ရတဲ့ အရာမျိုး မဟုတ်ပါလား ။ ( ဥပမာ ဆိုရရင် ကျောက်စကား နဲ့ ပေါ့ ။ အထဲ မှာ ဘာပါသလဲ ဆိုတာ သေချာ အနီးကပ် လေ့လာ သေချာကြည့် ခန့် မှန်း ဖြတ်ကြည့်ပြီး မှ အလကားကျောက်လား သိန်းချီတန်တဲ့ ကျောက်လား သိနိုင်သလို မျိုး ပေါ့ )
တစ်ကယ်တမ်း ပြန်စဉ်းစား မယ်ဆိုရင် ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် အချိန် ပေးရတယ် ။ ဥပမာဗျာ ၀မ်းတွင်းက မခံနိုင်လောက်အောင် အင်အင်း ပါချင်နေငြား တစ်ကယ့်တစ်ကယ် အရေးကြီးနေရာမျိုး ( ဥပမာ = အစည်းအဝေး ခန်းမ မိန့် ခွန်းပြောနေစဉ် ၊ ဘက်စ်ကား လူကြပ်ကြပ်ထဲ ညပ်နေစဉ် ) မှာ ဆိုရင် အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေ ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အောင့်အီးပြီး ၊ ပြီးမှ လှုပ်ရှားရတာမျိုး မလား ။ ထားပါ ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ …. စာဖတ်တော့မယ် ဆိုပါတော့ ။ အားနေပြီ ( သို့ မဟုတ် ) အချိန်ရပြီ ပေါ့ဗျာ ။ ကိုယ်က ဘာစာ ကို ဖတ်မယ် လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ စာကို ဖတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာကို ဖတ်လိုက်ရရင် ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာ တာပဲမလား ။ ဒီတော့ အဲဒီ အဖိုးတန်လှတယ်လို့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာ ဟာ ကိုယ့် အလိုပြည့်အောင် ဖြည့်ပေးလိုက်တာပဲ မလား ။ ဒီတော့ သူ က လဲ entertainment ပဲ ပေါ့ ။ ကိုယ့် ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးတဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေ ကို ဖျော်ဖြေပေးတဲ့ entertainment မဟုတ်ဘူးလား ။ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော် ။လူတိုင်းဟာ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် ဆန္ဒ ပြည့်စေတဲ့ ကိုယ့် ကို တစ်ခုခုပေးတဲ့ အကြောင်းအရာ ကိစ္စမျိုး အားလုံး ကို တန်တယ် လို့ သတ်မှတ်ကြတာ လို့ တွေ့ တယ်ဗျာ ။ ဒီတော့က တန်တယ် မတန်ဘူး ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ပေါ့နော် ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော် တွေးမိတဲ့ အကြောင်းအရာ လေး တွေ ကို ပြန် ပြီး ရေးတင်ကြည့်တာပေါ့နော် ။
mandalay gazette သူကြီး က ပြောထားတယ် ။ မတူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ နဲ့ ရေးပါတဲ့ ။ ကျွန်တော် ရေးတာလေး ကို ဖတ်မိရင် စဉ်းစားစရာ လေး တစ်ခုခုတော့ ရမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
စာဖတ်မှတော. များသောအားဖြင်. ဗဟုသုတ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးမဆိုဗဟုသုတ
ရပါတယ်။ အကြည်တော်၇ဲ. မိန်းမဋိကာ စာအုပ်မှာလည်း ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ခဲ.ရပါတယ်
ယူတတ်ရင် ဗဟုသုတက ပီမိုးနင်း ရေးတဲ. လိင်မှုကိစ္စ စာအုပ်တွေမှာတောင် ရနိုင်ပါတယ်
အသုံးချတဲ.သူအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။
၀ါသနာပါရင် ရွာထဲမှာ စာရေး စာဖတ် လုပ်.. တခါတလေ ရန်ပါ ဖြစ်လို့ ရလိမ့်မယ်။
(အကြည်တော် ၀တ္တုဖတ်တယ်ဆိုလို့ ပေါပေါလောလော စာတွေ ကို ဖတ်တယ် လို့ ပြောချင်လည်း ပြောကြပါစေ ဗျာ ။ )
ကျွန်မတော့ မပြောပါဘူး၊အကြည်တော်ရေးတာ တွေကောင်းတာ အများကြီးပါ။
ပထမဆုံးထွက်တဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းတွေနဲ့မိုးထားတဲ့အိမ်ဆိုရင် မိသားစုဖတ်လို့ရတဲ့ ဟာသလေးတွေ သန့်သန်စင်စင်ရေးထားတာပါ။ ဖတ်ရင်း မပြုံးဘဲမနေနိုင်တဲ့ စာအုပ်မျိုးပါ။
ဟာသ မြောက် အောင်ေ၇း ဖို့ဆို သာခက် ပါ တယ်။ အကြည်တော်ေ၇းတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးလည်း စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ပြန်ဖတ်၇င် ၇ယ် နေ၇တာမို့စိတ်ညစ်တာပျောက် ၇ပါ တယ်။ဟာသစာပေ မို့ အထင်သေးလို့မ၇ပါဘူး။ပေါပေါလောလောမဟုတ်၇ပါဘူး။
ဆူးရေ နီနေတာလေး ပြန်ဖျောက်ပေးလိုက်ပြီ